Izilwane ezincelisayo nezinyoni zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sibhekene nezimo ezintsha ezidala imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, isilwane ngasinye sishintsha ngandlela thile. Ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Nature Ecology lukukhombisa lokho izilwane ezincelisayo nezinyoni kunamathuba amaningi okuthi ziguquke futhi zivumelane nokushintsha kwesimo sezulu kunezinye ezinjengezilwane eziphila ezweni nasemanzini nezilwane ezihuquzelayo.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngalolu cwaningo?
“Siyabona ukuthi izilwane ezincelisayo nezinyoni zikwazi kangcono ukunweba izindawo zazo zokuhlala, okusho ukuthi ziyakwazi ukuzivumelanisa nezimo futhi ziguquke kalula. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu emazingeni okuqothulwa kanye nokuthi umhlaba wethu uzobukeka kanjani ngokuzayo, ”kusho uJonathan Rolland, wase-University of British Columbia (Canada) futhi ongumbhali wocwaningo.
Ukwenza ucwaningo, kusetshenziswe imininingwane yokusatshalaliswa kwezilwane ngokwezindawo, amarekhodi azo ezimbiwa phansi nalo lonke ulwazi oluhlobene nokuvela kohlobo lwazo. Izinhlobo eziyi-11.465 sezihlaziyiwe, kulokho okwenzeke khona ukubona lapho bebehlala khona eminyakeni eyizigidi ezingama-270 edlule kanye nezimo zemvelo abazidingayo ukuze baphile.
Njengoba kunikezwe izici zesilwane ngasinye nendlela yaso yokuphila, ukuguquka kwesimo sezulu kungabathinta ngandlela thile. Lokhu kusho ukuthi ezinye izilwane zingakwazi ukuzivumelanisa kangcono nezimo ezimbi kakhulu.
Njengoba lokhu kungekona ukuphela kokushintsha kwesimo sezulu okukhona emlandweni, Abaphenyi bathole ukuthi lezi zinguquko zinquma ukuthi izilwane zihlala kuphi.
URolland ugcizelele ukuthi iplanethi ibifudumele futhi ishisa kuze kube yiminyaka eyizigidi ezingama-40 eyedlule, okwenze kwaba yindawo ekahle yezinhlobo eziningi, kepha njengoba ipholile, izinyoni nezilwane ezincelisayo zikwazile ukuzivumelanisa namazinga okushisa abandayo. lokho kwabenza bathuthela kwezinye izindawo.
Kungenzeka ukuthi leli qiniso lingachaza kungani izilwane eziphila ezweni nasemanzini nezilwane ezihuquzelayo kungavamile ukubonwa e-Arctic.
Izilwane ezikwaziyo ukulala ubusuku bonke, ukulawula ukushisa kwangaphakathi, nokuvikela amaphuphu azo zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izilwane ezincelisayo nezinyoni zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nokushintsha kwesimo sezulu